म्यादी प्रहरी सडकमा, कुन प्रदेशमा कति खटाइयो ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
म्यादी प्रहरी सडकमा, कुन प्रदेशमा कति खटाइयो ?
१६ बैशाख २०७९, शुक्रबार १५:३८
संकल्प बोहरा- वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि सरकारले ४० दिनका लागि ९९ हजार ९९३ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गरेको छ । मतदानस्थलको संवेदनशीलताका आधारमा ७ प्रदेश र उपत्यकामा फरक–फरक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि ९९ हजार ९ सय ९३ जना म्यादी परिचालन गरेको छ । भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीहरुलाई ४० दिनका लागि सडकमा परिचालन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ४ हजार ७ सय ११ म्यादी परिचालन भएका छन ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलहरुलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यमा वर्गीकरण गरेको छ । आवेदन दिनेमध्येबाट ९९ हजार ९९३ जना छनोट गरेर तालिम दिइ ८ गते देखी सडकमा प्रहरी सहित म्यादी परिचालन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले ४० दिन काम गरेपछि प्रहरी जवानसरह ३० हजार २८० रुपैंया तलब र रासन बापत थप ७ हजार रुपैयाँ पाउँछन । उनीहरूले ६ हजार रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा र एक हजार रुपैयाँ गाडी भाडाका लागि पाउँछन । रासन र कपडासहित एकजना म्यादी प्रहरीका लागि राज्यकोषको ४४ हजार ४८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ त्यसरी एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि करिब साढे ४ अर्ब खर्च हुन्छ ।
निर्वाचन भयरहित र सुरक्षित हिसाबले होस् भन्ने हेतुका साथ प्रहरीले ड्रोनको प्रयोग गरेर पनि खबर संकलन तथा निगरानी गर्नेछ । मतगणनास्थल सुरक्षा र इजाजत पत्र प्राप्त निजी हतियार निर्वाचन अवधिभर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइसकेको छ।
निर्वाचन अवधिभर शान्तिसुरक्षा कायम राख्नका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा म्यादी प्रहरीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।